Guddoomiye Mursal oo la kulmay UN, USA iyo safiirada dalalka Copenhegan Group – Kalfadhi
Guddoomiye Mursal oo la kulmay UN, USA iyo safiirada dalalka Copenhegan Group
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxman ayaa shalay kulan la qaatay Wakiilo ka kala socday UN, USA iyo safiirada dalalka la isku yiraahdo Copenhegan Group oo ah safiirada dalalka saaxiibka dhow la ah Soomaaliya.
Guddoomiyaha iyo xubnihii uu la kulmay ayaa ka wada hadlay Doorashooyinka la filayo in ay dalka ka dhacaan Marka la gaaro sanadka 2021-ka.
Safiirada ayaa ku ammaanay Baarlamaanka Soomaaliya howlaha ay hayaan ee la xiriira Arrimaha Doorashooyinka gaar ahaan sameynta sharciyada muhiimka u ah Doorashooyinka Dalka,Sidoo kalena waxa ay amaaneen horumarada kala duwan ee ay gaartay Dowlad Federaalka Soomaaliya gaar ahaan Madaxweynaha, Baarlamaanka iyo Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.
Xoghayaha guud ee Golaha Shacabka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux oo kulanka ka dib la hadlay warbaahinta, ayaa sheegay in kulankaasi intiisa badan xoogga lagu saaray arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka iyo howllaha Dastuurka, kaas oo hadda dib-u-eegistiisa ay socoto.
Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay mutadawiciinta joogtada ah ee ololaha Isxilqaan